Izesekeli Factory, Abahlinzeki - China Izesekeli Abakhiqizi
Ukumiswa Kokumiswa Okuguqukayo
Njengenye yeziphanyeko ezincintisana kakhulu zenkampani, kubakaki bethu bokumisa abaguquguqukayo baklanyelwe ukwakheka okuyizicucu ezimbili kulungiselelwa uhla lwe-soldering yokuvula. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika.
16 Gauge Steel Panel Stud Ukuqapha
Njengomunye wabalengisi benkampani abancintisana kakhulu, onogada bethu bezitobha bathole ukuthandwa kakhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika. Futhi, zingamapaneli wensimbi ayi-16 wegeji ngokuhlelekile.
Umbala Wokulungisa Ipayipi Elimibalabala le-Pipe ye-Polyethylene
Njengenye yeziphanyeko ezincintisana kakhulu zenkampani, izibopho zethu zokulungisa amapayipi zithole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika. Futhi zifakwe izingalo zensimbi ezithambile ngamabhasikidi enjoloba.